UGoogle angahlawula iApple i-15.000 yezigidigidi zeedola ukuze ihlale iyinjini yokukhangela emiselweyo | IPhone iindaba
Kuyimfihlo evulekileyo ukuba uGoogle anike iApple iibhiliyoni zeedola minyaka le ukwenza ukuba ukukhangela kuGoogle kube yinto ekhethwayo kwisikhangeli seSafari, isivumelwano esikwiziphathamandla zabasemagunyeni abalawulayo.
Kunyaka ophelileyo, uGoogle wahlawula i-10.000 yezigidigidi zeedola ukuba ibe yinjini yokukhangela eSafari, isixa esinokunyuka siye kwi-15.000 yezigidigidi ngokwengxelo yenkampani yaseBernstein.
Kule ngxelo, ijolise kubatyali mali, uBernstein uthi kule minyaka izayo, le mali ingaqhubeka inyuka kwaye ifikelele kwinani eliphakathi kwe-18.000 ne-20.000 yezigidi zeedola ngo-2022. Kunye nakuhlalutyo lweNdleko zokuFumana iTrafiki kuGoogle (TAC).
Nangona kunjalo, isivumelwano phakathi kweApple neGoogle sinokungena kwiingxaki ezimbini ezinkulu. Kwindawo yokuqala, abasemagunyeni abalawulayo basalindelwe kwesi sivumelwano, kuba sithintela ukhetho lwezinye iinjini zokukhangela ngokusekwe kulowo ubeka eyona mali iphambili etafileni. Nangona umngcipheko wokulawula ungekho kufutshane, kunokwenzeka ukuba wenziwe kule minyaka imbalwa izayo.
Umngcipheko wesibini kwesi sivumelwano kukuba uGoogle akafuni kuphononongwa kwisivumelwano sakho. Ngale ndlela, ukuba sithathela ingqalelo into yokuba iingeniso zikaGoogle kwi2020 zazingama-40.270 ezigidi zeedola, inani ekufuneka lihlawule unyaka nonyaka ngumsindo wokwenene kwiiakhawunti zikaGoogle, ukuba nje amanani ahlala elawulwa , into esinokuyibuza ngokujonga izibonelelo zikaGoogle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » UGoogle angahlawula iApple i-15.000 yezigidigidi zeedola ukuze ihlale iyinjini yokukhangela emiselweyo
Umfanekiso onelebhile ye-iPhone 13 evuzayo kwinethiwekhi